Ku tabaruc si aad u dayactirto jardiinadeena xusuusta ee sharfaysa shaqada muddada dheer ee Dr. Tiller
U muuji taageeradaada helitaanka ilmo soo rididda iyo daryeelka caafimaadka taranka ee bulshadeena adiga oo bixinaya tabarucaad cabbir kasta ah.
Falls Church Healthcare Centre waxay dhiirigelisaa tabarucaadka laba lacagood oo bixiya oo taageera kuwa u baahan kaalmada dhaqaale ee haweenka iyo daryeelka ilmo soo rididda.
Helitaanka DARYEELKA SOO SAARINTA IYO CAAFIMAADKA, INC. (ARCH) | 501 (c) (3)
ARCH waxay caawin kartaa bukaanada ku nool Waqooyiga Virginia oo ay la kulmaayaan caqabado maaliyadeed si ay u helaan daryeelkaaga caafimaadka taranka ee daryeelka ilmo soo rididda, fayoobida haweenka iyo maaraynta dhicinta.
Booqo ARCH online at archfund.org
Dareen xor inaad ku tabarucdo badhanka Secure PayPal ee hoose, ama ku dir deeqdaada ciwaanka hoose.
Deeqaha Canshuur-dhimista ee Online-ka ah
Cashuurta Boostada Deeqaha Laga Jaro
Kaniisada Falls, VA 22042
Waxa kale oo aad samayn kartaa samafalkaaga Amazon Smile ARCH adiga oo isticmaalaya badhanka hoose:
DR. MAALIYADDA XASUUSTA TILLER
Sanduuqayada degdega ah ee FCHC, oo la aasaasay 2009 si loogu sharfo Dr. Tiller iyo qoyskiisa u heellanaanta caafimaadka taranka, ayaa loo sameeyay haweenka imanaya xaruntayada kuwaas oo ay la kulmaan caqabado dhaqaale. Sanduuqan hadda wuxuu ku biiray ARCH, laakiin waxaan kugu martiqaadeynaa inaad akhrido si aad u muujiso saameynta nolosha iyo shaqada Dr. George Tiller ay ku leedahay xarunteena iyo sidoo kale dhammaan bulshada daryeelka ilmo soo rididda.
Dr. George R. Tiller waxa lagu yiqiin oo aad loogu bogay wax qabadkiisii ​​wacnaa ee adeegyada ilmo iska soo rididda, kuma koobna Maraykanka oo keliya, laakiin adduunka oo dhan.
Rabitaanka uu u qabo inuu dhegeysto haweenka oo uu ka jawaabo baahiyahooda qoto dheer ayaa isaga muhiimad gaar ah u leh. Mabaadi'da guud ee Dr. Tiller ee naxariista, xushmada, cadaaladda, jacaylka, iyo ixtiraamka ayaa ahaa xoogga dhaqaajinaya awooddiisa inuu ku bixiyo adeegyadan, naxariis iyo xirfad, haweenka isku arkay duruufo masiibo ah.
Bishii Meey 31, 2009, Dr. Tiller waa la diley isagoo u adeegi jirey sidii kaniisaddiisa Wichita, Kansas.
Wadarta Is-beddelka Waxsoosaarka ayaa abuuray fiidiyow YouTube ah oo loogu talagalay George Tiller Memorial Garden Dedication oo dhacay Sabtidii, Ogosto 9, 2009.
Daahirinta Beerta Xusuusta ee Dr George Tiller 8/08/2009
ISannadkii 2001, Shabakadda Daryeelka Ilmo soo rididda ayaa Dr. George Tiller ku maamuustay abaal-marin. Waa kuwan erayadiisa ku saabsan sida ay uga go'an tahay haweenka.
George Tiller Ayaa Hadley